अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पत्र किमको हातमा ! « Khabarhub
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पत्र किमको हातमा !
८ असार २०७६, आइतबार
प्योङ्याङ– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पठाएको पत्र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले प्राप्त गरेका छन् ।
उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था कोरियन केन्द्रीय न्युज एजेन्सीले आइतबार जनाएअनुसार ट्रम्पको व्यक्तिगत पत्र किमले प्राप्त गरेका हुन् । पत्र पढेपछि सर्वोच्च नेता किमले पत्रप्रति सन्तुष्टि जनाएको पनि समाचारमा जनाइएको छ । पत्रमा के कुरा लेखिएको भन्ने उल्लेख नगरे पनि उनले पत्रमा गज्जबको विषयबस्तु लेखिएको जनाएका छन् ।
किमले त्यसमा रहेको चाखलाग्दो विषयमा गहन ढङ्गले सोचविचार गर्ने आशय व्यक्त गरेको बताइएको छ । त्यसैगरी अहिले ट्रम्पको पत्र कसरी र कहिले किमलाई पठाइयो भन्ने बारेमा पनि खुलासा गरिएको छैन । त्यसबारे अमेरिकाले पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
गत फेब्रुअरीमा भियतनाममा ट्रम्प र किमबीचको दोस्रो शिखर बैठक विनाकुनै निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । त्यसपछि अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको वार्ता अनिश्चित रहेको छ ।
उत्तर कोरियाले परमाणु कार्यक्रम परित्याग गर्नु पर्ने अमेरिकाको चाहना र आफूविरुद्ध लगाइएका प्रतिबन्धहरू फुकुवा हुनु पर्ने उत्तर कोरियाको अडानका कारण सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति : ८ असार २०७६, आइतबार ८ : ०५ बजे